Ukukhohliswa kwesimo sezwe: isayensi eminingi kanye nokwaziswa nge-Afrika kuye kwaqothulwa "Ngemuva komlando wokukhohlisa, i-African geography ayizange iphunyuke ekugqibeleni"
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Ngo-Okthoba 24, 2018 00: 22 Awekho amazwana
Kumephu endala yonyaka "1665" ekhombisa ukuvakasha kwe-Afrika, uLwandle i-Atlantic namuhla luphawulwe uLwandle i-Ethiopia. Kungani igama lolwandle i-Ethiopia lalingu ... Funda kabanzi
Imvelaphi yegama elithi 'guinea' ayiqiniseki: igama iGuinea livela okokuqala ngandlela-thile ematheksthi abhalwe ku-1453 ngokulandelana kwezindaba zokuhamba zokuhlola ... Funda kabanzi
Inkambo ephakathi kwe-majestic Congo River iqala e-Wagenia Falls. Ukudoba nabantu base-Enya (noma iGenya) kwakuwumsebenzi wamasiko owawuqhutshwa ngezigaba ezimbili: ekuseni nakusasa. Funda kabanzi
NJENGOBA igama livela kuDIKASHI, "Iphunga elihle" liphakathi kwemizi yezivakashi zaseCongo-Kinshasa. Yisikhungo sokumbiwa kwezimayini kanye nenombolo ebalulekile yokuxhumana futhi idinga okokuqala ngo-no ... Funda kabanzi
ILake Albert isenkabeni yezwekazi i-Afrika, emngceleni phakathi kwe-Uganda ne-DRC. Leli chibi liyinyakatho ekude kakhulu ekuqoqweni kwamachibi eGreat Rift Valley. Kukala ... Funda kabanzi
Basebenzisa amasu amadlozi, ahlukile emhlabeni. Baqala ukudoba ngezandla ezingenalutho, inhlanzi egobhoza amanzi ibhajwe phakathi kwamadwala nodlame lomfula ihlangana ... Funda kabanzi